U.S. oo u dabacday Hey'adaha Gargaarka - BBC News Somali
U.S. oo u dabacday Hey'adaha Gargaarka
2 Agoosto 2011
Image caption Malaayiin qof ayay abaaruhu saameeyeen
Dowladda Mareykanka ayaa dabcisay mowqifkeeda hey'adaha gargaarka ee ka hawlgala goobaha ay al-Shabaab ka taliso. Maamulka Obama ayaa muujiyay in hey'adaha samafalku ay cunto gaarsiin karaan deegaanada al-Shabaab ka taliso, iyagoo aan ka cabsan in la maxkamadeeyo.
Al Shabab oo lagu eedeeyo in ay gacan saar la leedahay al-Qaacida, waxay ka talisaa gobollo badan oo ku yaal bartamaha iyo koofurta Soomaaliya. Waxaa ka mid ah Bakool iyo Shabeellada Hoose, oo Qarammada Midoobay ay ku dhawaaqday in macluul ba'ani ay ka jirto. Mareykanku wuxuu ilaa iyo hadda ku weydiisanayay in la siiyo damaanad ah in gargaarka laga bixinayo dhulka Shabaab ka taliyo aan Shabaab ka faaideysan doonin. Laakiin taasi sidee ku suurta galeysaa.
Waxaa la sheegaa in Shabaab ay hey'ad kasta oo ka shaqeyneysa degaanka ay iyadu maamusho looga baahan yahay in ay bixiso lacag is diiwaan gelin ah, ka dibna shaqaalaheeda canshuur laga qaado. Ma cadda in Mareykanku uu hadda taa aqbali doono.
Si kastaba ha ahaatee, tallaabada ay Dowladda Mareykanku qaadday, waxay walaaca ka saaerysaa hey'adaha hadda ka hawlgala dhulka Shabaab ka taliyo. Waxaa kale oo laga yaabaa in ay qaar hor leh ku dhiirri geliso in ay tagaan dhulkaas oo ay dadka gargaaraan.
Tallaabadani waxaa kale oo ay kordhin doontaa cadaadiska Shabaab ku saaran in ay oggolaadaan dhammaan hey'adaha gargaarka. Shabaab iskuma fiicna hey'adaha qaar. Waxay mamnuucday qaar ka mid ah. Waxaa ka mid ah, Barnaamijka Cuntada Adduunka, WFP, oo ah hey'adda Qaramada Midoobay ee khibradda u leh in ay qeybiso raashin mucaawino ah oo ad u badan.
Khilaafka Shabaab iyo WFP muddo dheer ayuu soo socday. Shabaab waxay ku eedeysay hey'addan oo ka tirsan QM, in ay raashinka qeybiso marka dalagga beeruhu soo go'o. Taasi waxay waxyeeleysaa ayay yiraahdeen beerealeyda iyo wax soo saarkaba. Shabab waxay sheegtay, in ay isku dayday in ay WFP ku khasabto in ay raashinka ka iibsato suuqa Soomaaliya, laakiin taasi ay u suurta geli weyday.
Arrinta labaad waxay ahayd Mareykanka oo Shabaab u arka urur argagixiso. Cid kasta oo Shabaab lacag siisa ama la macaamisha waxaa lagu aqabsan karay falkaas ay ku kacday.
Hadda oo ay u muuqato in Mareykanku soo dabciyay mowqifkiisii, ma ahan in dhammaan caqabadihii ay meesha ka baxeen. Su'aasha weyn ee harsan waxay tahay, Shabaab ma ku dayan doonaa Mareyknaka? Oo ma soo dhoweyn doonaa hey'adaha gargaarka kuwooda doonaya, awoodana in ay gaajada ka badbaadiyaan carruurta iyo hooyooyinka Soomaaliyeed.